Kubuntu 18.04 Kuisa Nongedzo | Linux Vakapindwa muropa
Kubuntu 18.04 Kuisa Nongedzo
En uku kuburitswa kutsva kweKubuntu 18.04 izvo inoitwa patsva neFirefox 59 sewebhu browser, LibreOffice 6.0 sehofisi suite, Kirta 4.0.1 padivi rekugadzirisa mufananidzo uye dzakasiyana siyana dze KDE desktop maturusi maturusi senge kio-gdrive, Kstars, KDEConnect pakati pevamwe.
Pachiitiko ichi Ini ndinogovana newe ino diki yekumisikidza gwaro yakanyanya kutarisana nevashandisi vatsva. Kunyangwe Kubuntu yakabva kuUbuntu, Kubuntu inoenderera ichitsigira 32-bit masisitimu saka ichiri chakanakisa sarudzo kune avo vanoda kuenderera neUbuntu uye vasingade kushandisa migove inopa iyo chikamu chekuonekwa.
El Chekutanga chinodiwa kuisa Kubuntu 18.04 LTS kurodha pasi iyo ISO yeiyo system yeiyi zvakakosha zvakanyanya kuziva kana isu zvakare tine zvishoma zvinodiwa kuti tikwanise kuisa iyo system uye tisina matambudziko ekushanda.
Kuti utore ISO iyo tinozviita kubva kune yayo yepamutemo saiti iyo unozviwana mune iyi link.
2 Gadzirira Kuisa Media
2.1 Kubuntu 18.04 LTS USB Kuisa Midhiya
3 Kubuntu 18.04 LTS yekumisikidza nhanho
Kuisa Kubuntu 18.04 Tinofanira kuve nezvinenge zvinotevera zvinodiwa:
Processor: 1 GHz x86.
RAM ndangariro: 1 GB.
Hard Dhiraivha: 10 GB yeiyo yakazara kuisirwa neshanduko inosanganisirwa
VGA giraidhi kadhi uye yekutarisa inokwanisa kutsigira resolution ye1024 × 768.
CD-ROM kana network kadhi muverengi.
Kadhi rine ruzha.
Gadzirira Kuisa Media
Windows: Tinogona kuipisa ISO neImgburn, UltraISO, Nero kana chero chirongwa chero vasina ivo muWindows 7 uye gare gare inotipa sarudzo yekukiya kurudyi paIO.
Linux: Iwe unogona kushandisa chero CD yekugadzirisa dhizaini dhizaini, kunyanya iyo inouya nemifananidzo yakajeka, pakati pavo iri, Brasero, k3b, uye Xfburn.
Kubuntu 18.04 LTS USB Kuisa Midhiya
Windows: Unogona kushandisa Universal USB Installer kana LinuxLive USB Musiki, zvese zviri nyore kushandisa.
Linux: Iyo yakakurudzirwa sarudzo ndeye kushandisa iyo dd yekuraira.
dd bs=4M if=/ruta/a/Kubuntu.iso of=/dev/sdx sync
Kubuntu 18.04 LTS yekumisikidza nhanho
Tisati tatanga neKubuntu bhutsu, tinofanirwa kumisikidza iyo BIOS yekomputa yedu kutanga neyedu yekuisa svikiro, pamusoro peiyo kana iine UEFI unofanirwa kuimisa, kune avo vasingazive kuti UEFI chii, vanogona kutarisa zvishoma mumambure.
Kana iyo system yabviswa, isu tichava mukati mayo uye skrini yakafanana neiyo ini yandinoratidza ichaonekwa, kupi isu tichaona imwechete icon pane desktop, isu tinofanirwa kungopeta tinya izvi kuti utange iyo yekuisa wizard.
Nayo Iyo wizard ichatanga uye nekukurumidza chikamu chekutanga chekugadzirisa chinenge chiri kusarudza mutauro Izvo zvatiri kuzoshanda pamwe neiyo inosimudza uye iyo iyo yedu sisitimu ichave nayo kana yaiswa uye yasarudzwa, tinobaya pane inotevera.
Pane ino skrini Izvo zvichatibvunza isu kumisikidza mutauro uye kiyi yemepu yekhibhodi yedu, uko kwatichazoratidzwa mufananidzo nechinzvimbo chemakiyi uye neatino simbisa nawo kana iri iyo yatiri kushandisa, yatosimbiswa tinopa mune inotevera.
Iye zvino Mune inotevera nhanho, inotibvunza kana isu tichida kuti kuisirwa kuitwe zvakajairika neese Kubuntu kunyorera uye kumisikidza kana kana tichida kushomeka kuisirwa., kumisikidza uku kunosanganisira chete izvo zvinodikanwa, zvinova zvakakosha kumisikidzwa uye webhu browser, zvimwe zvese zvakaraswa.
Pazasi inotibvunza kana isu tichida kuisa zvakavanzika madhiraivho pamwe nekuvandudzwa yeiyo system apo kuiswa kwacho kunoitwa pane yedu michina.
Muchikamu chinotevera tinofanirwa kugadzirisa nzvimbo iyo Kubuntu 18.04 ichaiswa pakombuta yedu. Pano tine sarudzo mbiri.
Chekutanga kubvisa zvese kubva ku diski uye uve nehurongwa hwakaiswa pane rese diski.
Iyo imwe yacho, inova «Chinyorwa», mairi tichagadzirisa diski kwatinoda kuti iiswe kana chikamu chatinozopa pakombuta yedu kuhurongwa, apa tinogona zvakare kugadzirisa zvikamu kuti tipe chinjo. kana zvichidikanwa uye zvakare yekumberi kumisikidza inoparadzanisa zvikamu kune zvatinoda.
Waita izvi, pachiratidziro chinotevera isu tinongosarudza yedu yenguva nguva.
Uye pakupedzisira isu tinongogadzirisa mushandisi, pamwe nephasiwedi yemaitiro atichapinda mairi uye ichave iyo yatinoshandisa kushandisa iyo superuser ropafadzo.
Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira kuisirwa Kubuntu 18.04 pakombuta yedu kuti ipedze, kumagumo isu tinongofanirwa kubvisa yedu yekumisikidza yepakati uye titangise komputa yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kubuntu 18.04 Kuisa Nongedzo
Mhoro! tsananguro yakanaka kwazvo! Ini ndoda kuisa ino inoshanda system pabhuku rangu rekare rine win vista, mubvunzo mumwe chete wandinayo, ndinogona here kushandisa 4 gb pen drive?
David yeshael akadaro
Hongu, huremu hunofungidzirwa hweiyo ISO i1.7 GB
Pindura David Yeshael
Yakanaka chinyorwa, ini ndakaedza iyo inorarama CD uye inomhanya zvakanaka, asi kana ini ndaisa iyo huru menyu inongowoneka kwehafu yechipiri uye inonyangarika uye ini handigoni kusarudza chero chinhu .Chingave chii chikonzero?
Pakati pezvishoma zvinodikanwa pakuisirwa, iwe unoisa zvarinofanira kuva: CD-ROM muverengi kana network kadhi.
Yangu pc haina chero yazvo asi ini handinzwisise kuti nei zvichikosha kuti iiswe, iine USB paunonyora mufananidzo uye wotanga kubva pane zvakakomba zvakakwana, handiti?
Iwo mashoma anoratidzwa, ndiko kuti, izvo zvakakosha kuti ukwanise kuita kumisikidza uye kushanda kweiyo system.
Ini ndoda kuiisa pane pc inouya seOS, Endless OS, kana ini ndikasarudza iyo inotungamirwa sarudzo: shandisa iyo diski yese, iyo ichandimomesa uye ini ndichango chengeta kubuntu seanoshanda system?
Kana ini ndikasarudza sarudzo yemanyorero, ini ndinogona zvakare kugovera yese nzvimbo kubuntu?
Kana zviri zvekuchinjanisa, iyo pc inondiunzira 4 gb yegondohwe, saizii ingazokurudzirwa kugovera chinja kana default?
Iwe unogona kugovana zvakakwana dhiraidhi rakaoma pakati pemaitiro maviri. Kuva neshanduko yakakura kudarika 1GB paPC ine anopfuura 2GB ye RAM kupusa.
Izvo hazviite kuti ndiiise, kukanganisa 5 (kuisa) kunogara kuchioneka, uye hakuzoisa, ini ndato fomata pc yangu yese, ndichifunga kuti ingave iri hard drive, uye memory (sd kadhi) I handikwanise kuzvipa mhosva, nekuti, ini ndaishandisa kuisa windows pasina dambudziko
Pindura kuna Lazyboy
Izvi zvinowanzoitika nekuda kweimwe yeatatu matambudziko:
1- Dhisiki rako rakaoma rine zvikamu zvakashata, unogona kutarisa / kurigadzirisa neGNU / Linux nemirairo fsck -c / dev / sdxX (x - disk, X - chikamu) kana neWindows CMD ne chkdsk c: / f / r
2- Iyo ISO chifananidzo chawakateedzera hachishande, unogona kuzvitarisa ne md5sum kana kurodha pasi zvakananga kubva http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/.
3- Iyo tambo yeSATA kana iyo RAM ndangariro inogona kunge yakasviba uye / kana kushatiswa.
Ini ndaireva kuti ndangariro ye RAM yakasviba kana kukuvara uye / kana dhisiki rakaomarara rakabatanidzwa kune yekutanga SATA (SATA 0) painofanira kunge iri mushure memuverengi (kana iwe uri kuisa nemuverengi).
Ini ndinogona kuisa kubuntu 18.04 64bits ine 2gb yegondohwe uye neIntel 945gc mifananidzo
Pindura kuna Eryck
Ehe, hapana matambudziko!
oscar martin snowy akadaro
Kutevera matanho ese aunonyora, pakupedzisira kuiswa kunotadza.
Chidzitiro chinobuda chine zvikwambo zvisingaverengeki.
Pindura kuna oscar martin nevado
Ndeipi shanduro yawakashandisa?
9 zvinhu zvekuita mushure mekuisa Ubuntu 18.04
Maitiro ekuisa League of Legends paLinux ne PlayOnLinux?